Wararka - Qodobbada Xakamaynta Tayada Waxyeelaynta Kulul ee Saddex-geesoodka ah iyo Daaweynta Cilladaha leh
Ku dhufashada shaabad kulul oo saddex-geesood ah waa isku-darka saamaynta kuuskuusku riixayo iyo ku tumashada kulul, taas oo leh anti-been-abuur wanaagsan iyo saameyn farshaxan, sidaa darteed si ballaadhan ayaa loo isticmaalay. Laakiin xakamaynta tayada shaabbadda kulul ee saddexda geesood ah waa dhibaato isku dhafan. Warqadani waxay si kooban u qeexaysaa qodobada xakamaynta tayada shaambada kulul ee saddexda cabbir leh iyo ka shaqeynta cilladaha, waxyaabaha ku jira tixraaca asxaabta:
Tayada Ku Dhufashada Kuleylka Saddex-geesoodka ah
Sii ciyaar buuxda sifooyinka astaamaha anodized iyo saxanka, si markaa qalabka, qalabka, deegaanka, heerkulka, cadaadiska, xawaaraha iyo qodobo kale iyo daabacaadda inta udhaxeysa sameynta isku dhaf wanaagsan, sameynta isku dheelitirka habka ugu wanaagsan, uguna dambeyn la soo saaro alaabooyin shaabad kulul oo saddex-cabbir leh lagu qanco.
Marka la barbardhigo saxanka naxaasta caadiga ah iyo saxanka embossing, habka wax soo saarka ee saxanka shaabad kulul oo saddex-cabbir leh iyadoo la isticmaalayo isla meeshaas, waxaana jira kala duwanaansho weyn. Sababtoo ah shaabad kulul oo saddex-geesood ah ayaa ah shaabad kulul ama barar saxaafadeed si loo dhammaystiro hawsha, markaa nooca kuleylka kulul marka loo eego shaabad kulul oo fudud iyo samaynta heerarka tayada saxanka ayaa ka sarreeya, shuruudaha samaynta saxanka ayaa aad u adag, geeddi-socodkuna waa ka dhib badan yahay. , tusaale ahaan, nooca naxaasta caadiga ah ee dhinta hoose waa mid fidsan, uma baahnid in si gaar ah loo sameeyo, iyo shaabad kulul oo saddex-cabbir ah oo ay ugu wacan tahay sameynta qaabka gargaarka saddexda-cabbir ah, marka nooca cadaadiska ee aadka u kulul ee dhinta hoose waa inuu la soco nooc kulul oo u dhigma warqadda caaryada ee labka ah, oo ah cadaadis kulul oo dhinaca biririfta dhinta hoose ah waa in la kiciyo, oo dhererka kuuskuusyada iyo cadaadiska kulul waxay u dhigmaan nooca qoto dheer ee fasaxa.
Taarikada kuleylka kulul oo tayo sare leh ayaa aasaas muhiim ah u ah hubinta tayada alaabada kuleylka kulul ee seddex-geesoodka ah. Nooca kuleylka kuleylka ah waa in laga sameeyaa alaab bir ah oo tayo sare leh, guud ahaanna laga sameeyay saxan naxaas ah oo lagu xardho laser. Birta aan xarka lahayn sidoo kale waa soosaarida nooca shaabbadda kulul ee walxaha aadka u wanaagsan, sababtoo ah dusha oo aad u siman, marka la barbar dhigo nooca naxaasta ah, nooca birtiridda kulul ee birta ah ee dhalaalka qoraalka kulul ee dhalaalka iyo qeexitaanka ayaa ka sarreeya, saameynta isku-xirnaanta iyo qulqulka cadaadisku sidoo kale waa ka fiican yahay.
Sababtoo ah nooca riixaya kulul waxaa lagu hoos shaqeeyaa heerkulka sare iyo cadaadiska sare, cilladaha yaryar ee aan ka muuqan xaaladaha caadiga ah waxay saameyn weyn ku yeelan karaan tayada wax soo saarka. Sidaa darteed, nooca cadaadiska kulul ee xakamaynta tayada waa inuu ku dadaalaa heer sare, si looga takhaluso tayada dhibaatada qarsoon ee isha.
Guud ahaan, nooca riixitaanka kulul waa inuu ahaadaa dhumuc le'eg, qaab, qoraal xardhan oo cad, qoto dheer oo joogto ah; Dhimashada hoosta waa inay ahaataa mid fidsan oo aan xoqin, isla cabirkeeda, dildilaac lahayn, oo ay ka buuxdo adkeysi; Nooca kuleylka kuleylka leh iyo qeybta hoose ee dhimashadu uma muuqan karaan cilladda isha qaawan, burburka, goobooyinka, nabarrada iyo cilladaha kale.
Tayada anodized ayaa si toos ah u go'aamisa muuqaalka alaabada shaabad kulul oo saddex-cabbir leh. Tayada takhasuska leh ee aluminium anodized waa inaysan lahayn dhibco muuqda oo dhalaalaya, dhibco mugdi ah ama leysarka saxanka leysarka, lakabka difaaca ee dusha sare waa mid siman oo hufan, ma jiro wax ceeryaamo iyo cawl leh. Marka kormeerka iftiinka anodized, waa inaysan jirin dhibco cad oo muuqda, dhibco wasakh ah, baro koollo, godad ciid iyo cilado kale oo tayo leh.
Marka lagu daro waxqabadka muuqaalka, waxqabadka kulul ee ku habboon ee aluminium oksaydh sidoo kale waa mid aad u muhiim ah. Waa mid ka mid ah qodobbada go'aan qaadashada saameynaya tayada shaabadda kulul, iyo isku dhejinta, xoqidda xoogga iyo caabbinta saameynta waxaa si toos ah loogu go'aamiyaa waxqabadka shaabad kulul. Si loo hubiyo in aluminiumka elektiroonigga ah ee ugu fiican uu muujin karo waxqabadka ugu wanaagsan ee kulul, maahan oo keliya in si taxaddar leh loo doorto warqad, khad, saliid khafiif ah, kiimikada kiimikada, sida varnish sidoo kale waxay la macaamilaysaa hannaanka ku-shaandheynta kulul sida heerkulka, xawaaraha, cadaadiska si loo dejiyo macquul , waa inuu sidoo kale isku dayaa inuu kululeeyo ka hor intaan la soo saarin tiro, si loo hubiyo dhalidda goorta wax soo saarka ballaaran.
Intaa waxaa dheer si loo xaqiijiyo sifooyinka ku habboon ee birta ee aluminium anodized ah iyadoo la adeegsanayo tijaabada birta, qalab gaar ah ama cajalad waa in sidoo kale loo isticmaalaa in lagu tijaabiyo xoogga diirka, caabbinta saameynta iyo sifooyinka kale ee aluminium anodized ah. Haddii xoogga diirka ee aluminium anodized aad u yar yahay, habka wareejinta kuleylka kulul waxaa laga yaabaa inuu umuuqdo inuu hoos u dhigayo aluminium ama u wareejiyo dhibaatooyinka saboolka ah; Taas bedelkeeda, anodized way adagtahay in gabi ahaanba la wareejiyo, shaabbadda kulul kama muuqato cilladda tayada. Haddii caabbinta saamaynta ee anodize ay liidato, dhibaatada daadinta aluminiumku waxay ku dhici doontaa geeddi-socodka cadaadiska concave iyo convex, iyo waxqabadka sheyga la dhammeeyay ayaa ah qaybta shaabbadda kulul ee aan dhammaystirnayn. Sidaa darteed, cabirka aasaasiga ah ee lagu xallinayo hannaanka shaabbada saddex-geesoodka ah ee aluminium, aan dhammaystirnayn, xumbada, kala-soocidda lakabyada iyo cilladaha kale ee tayada leh ayaa ah in si buuxda loo fahmo sifooyinka kala duwan ee aluminium anodized ah. Soosaarka shaabad kulul oo saddex-cabbir ah oo xirmada sigaarka ah, aluminium holographic anodized aluminium ah oo leh caabbinta heerkulka sare iyo kahortagga been-abuurka ayaa guud ahaan la xushay. Noocan aluminiumka anodized wuxuu leeyahay xoog diir wanaagsan iyo caabbinta saamaynta, ma fududa in la beddelo, wuxuuna ku habboon yahay waxqabadka shaabad kulul, markaa waxay si wax ku ool ah u hubin kartaa tayada alaabooyinka dhammaaday.
Intaa waxaa dheer, seddex-cabbir qaabeynta masaafada saxan ee foornada anodized waa inay ahaataa mid iswaafaqsan, kama badnaan karto qaladka cabbirka cabbirka loo dhigay (qaladka <0.1mm). Sababtoo ah xisaabinta tallaabada kuleylka kulul, masaafada saxanka oo ah barta isha isha laser, xitaa haddii uu jiro qalad yar oo keliya, ka dib cadaadis badan oo kulul, qaladka isugeyntu wuxuu noqon doonaa mid la yaab leh, mararka qaarkood xitaa ilaa tobanaan sentimitir, oo keenaya a qashin badan, sidaa darteed masaafada saxanka anodized waa in si adag loo xakameeyo.
Habka wax soo saarka shaabbadda kulul ee saddex-geesoodka ah, laga bilaabo "kulul" iyo "cadaadis" laba waji oo ah xakamaynta tayada, si looga fogaado isku dhejinta liidata, khadadka gadaal gadaal loo jiido, shaabad kulul ma aha cillado tayo sare leh; Si loo toosiyo aluminium oksaydhka xabagta kulul ee dhalaalaya iyo qalinka, varnish, varnish inta udhaxeysa xiriirka qaraabada Sidoo kale ubaahan inaad dejiso dhibco xakameyn tayo leh mashiinka daabacaadda, fiiro gaar ah u yeelo xaddiga khadadka, saamaynta qalajinta khadadka, xaddiga budada lagu buufiyo geedi socodka cadaadiska kulul, iyo xakamaynta adag, waqtiga xallinta dhibaatooyinka tayada.
Xakamaynta heerkulka oo ah barta ugu muhiimsan ee xakamaynta tayada shaabad kulul oo saddex-cabbir ah, xakamaynta adag ee waqtiga kululaynta, iyo in la hubiyo in heerkulku kordhayo, kala duwanaanta dhicitaanka iyo xawaaraha kuleylka kulul si loo ilaaliyo isla jaanqaadka. Qadarka daaha kulul ee dhalaalaya anodized kulul waa mid aad u yar, sidaa darteed haddii ay hesho leexasho yar kuleylka kuleylka kulul, waxay si toos ah u saameyn doontaa tayada wareejinta ee aluminium anodized ah. Intaa waxaa dheer, dusha sare ee anodized ee lakabka aluminium birta sidoo kale waa mid aad u dhuuban (dhumucdiisuna waa 1 ~ 2μm oo keliya), waxayna aad ugu nugul tahay isbeddelada heerkulka, sidaa darteed waa inaan si taxaddar leh u xakameynaa heerkulka shaabad kulul.
Laakiin qawaaniinta heerkulku ma sahlana in la xakameeyo, sidaa darteed habka wax soo saarka dhabta ah, badanaa waxaa sabab u ah isbedbedelka kuleylka kuleylka kulul iyo dhibaatooyinka tayada qaarkood. Tusaale ahaan, heerkulka kuleylka kulul waa mid aad u hooseeya, dhalaalka kululeeyaha dhalaalka kulul ee anodized kuma filna, wuxuu u nugul yahay shaabbadda kulul ee aan dhammaystirnayn, nooca dhejiska, shaabad kulul, timo iyo cilado kale oo tayo leh; Marka heerkulka kuleylka kulul uu aad u sarreeyo, dusha sare ee lakabka aluminium ee anodized ayaa dhalaali doona, waxaa jiri doona ifafaale fiiqan, laakiin sidoo kale wuxuu soo saarayaa midab xumo, ceeryaanta dusha sare, ma dhalaal laser iyo cilado kale oo tayo leh. Intaa waxaa dheer, xumbada, aluminium, xoqida iyo cilladaha kale iyo xakamaynta heerkulka kuleylka kulul waxay leeyihiin xiriir weyn, soo saaruhu waa inuu ku saleysnaadaa waxqabadka gaarka ah ee tayada cilladda si uu ula qabsado heerkulka kuleylka kulul.
Si loo sameeyo alaabooyin shaabad kulul oo saddex-geesood ah iyo isku-xirnaanta cadaadiska fudud iyo badeecooyinka isku-dhafan ee isku-dhafka iyo saameynta qulqulka la barbardhigi karo, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo saameynta ku-dhufashada kulul isla waqtigaas, tayada isku-dhafka iyo xakamaynta cadaadiska qulqulka. Sababtoo ah shaabad kulul oo saddex-cabbir ah ayaa la dhammeeyaa isla waqtigaas isla markaana isku koobnaanta saxaafadda iyo habka loo yaqaan 'convex process', cabbirka cabbirka kaliya ma saameynayo ku dhejinta anodide, laakiin sidoo kale wuxuu la xiriiraa saameynta isku-xirnaanta saxaafadda iyo isku-laabashada, mararka qaarkood waxaa jiri kara khilaafyo aan la-heshiin karin laba. Tusaale ahaan, cadaadiska ayaa xoogaa ka weynaaday, waxaad ku kordhin kartaa isku-duubka anodization warqadda, oo u fiican ku dhufashada kulul, laakiin habka loo maro isku-dhafka saxaafadda iyo waraaqaha waxyeellada leh ayaa dhici kara.
Sidaa darteed, si loo gaadho saamaynta ku dhufashada ugu wanaagsan ee ku saleysan in aan la burburin warqad, waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh loo dejiyo cadaadiska, oo si macquul ah loo hagaajiyo dhererka muuqaalka kulul ee kululaynta, isku hagaajinta saxda ah ee concave iyo conx hoose u dhinta, si hubi in dhammaan noocyada riixaya kulul iyo dhererka hoose ee dhimashadu, fidsanaantu ay tahay mid iswaafaqsan. Intaa waxaa dheer, laakiin sidoo kale si loo hubiyo tayada raadraaca dhimashada hoose, gaar ahaan dhimashada hoose ayaa lagu soo rogay tobanaan kun oo jeer oo caabbinta saameynta ah, fiiro gaar ah waa in loo bixiyaa si loo hubiyo heerka cillad-darrada iyo adkeysiga hoose ee dhimashada, iyo bedelida waqtiga dhimashada ee duugoobay.
Habka wax soo saar ee shaabbadda kulul ee saddex-geesoodka ah, cilladaha tayada ayaa dhici kara wakhti kasta, waxayna u baahan yihiin in wax laga qabto waqtiga. Dhexdooda, iyo taam ahaanta khadadka anodized waxay xiriir dhow la leedahay cilladaha ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin adhesion anodized, qalinka gadaal u riix, shaabad kulul, aluminium aan dhameystirneyn iyo wixii la mid ah.
Ku lifaaqan Xun
Habka wax soo saarka shaabbadda kulul ee saddexda geesood ah, ku guuldarreysiga xajinta anodized waxaa badanaa lagu muujiyaa labada dhinac ee soo socda, sababaha sidoo kale way kala duwan yihiin.
Mid ayaa ah in aluminiumka anodized aan si adag loogu dhajin karin dusha sare ee daabacaadda, xitaa wuxuu noqon karaa shaabad gebi ahaanba kulul, iyo ifafaalaha aluminium ama dhammaystir la'aanta weyn ayaa soo muuqan doonta markii cajaladda la jiido. Falanqaynta ugu dambeysa, tani waxay sabab u tahay isku dhejinta liidata ee aluminium anodized, waqtigan baahida loo qabo in la hagaajiyo waxqabadka kuleylka ku habboon ee aluminium anodized, ama lagu beddelo aluminium cusub oo anodized ah.
Midda kale waa shaabad kulul ka dib markii aluminium anodized si adag loogu dhejin karo dusha sare ee daabacaadda, laakiin waxaa jiri doona ifafaale gadaal u noqosho. Ifafaalahaan waxaa sababa isku dhejinta liidata ee khadaka, iyo la qabsashada daabacaadda iyo waraaqda oo la qalajiyo khadkuna gabi ahaanba lama xiriiro arrimo kale, waqtigan, waxaan u baahanahay inaan hagaajino khadadka daabacaadda iyo la qabsashada warqadda, ama aan hagaajino heerka qallajinta qaddarka .
Ku Dhufashada Shaabad Kulul
Sababaha ugu waaweyn ee shaabad kulul loo lumiyo waa sida soo socota: mid ayaa ah budo aad u badan dusha sare ee daabacaadda, waana sababta ugu badan; Laba waa khadku gabi ahaanba kuma qallajin karo shaabadda kulul; Seddexaad, dusha sare ee lakabka khadku wuxuu ku dahaadhan yahay lakab difaac ah, varnish iyo lakab kale oo cusbi ah, si aan loo helin "isku xirnaansho". La kulan shaabad kulul ma aha dhibaatooyinka tayada, waa inaan ka soconaa xaqiiqda, dhibaatooyinka gaarka ah falanqeyn gaar ah, ha ku deg degin shaabad kulul, si looga hortago soo saarista tiro badan oo shilalka tayada qashinka ah ah.